Uphuthelwe yimizwa emi-3 kwengu-5 yokwenza ukuvela | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 22, 2014 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Bengikhona emcimbini wokwethulwa kwamuva nje wencwadi yokuphrinta kuphela ekhuluma ngesiko lokudla laseMidwest. Njengoba ngikhulume neqembu elidalile, bekukhona ukuziqhenya okumangazayo kokuqukethwe, ubuciko, nomkhiqizo ophelile. Umagazini bewuqinile futhi ubulizwa ikhwalithi yephepha, uzwe iphunga elisha, futhi cishe nambitha ukudla okuchazwe kahle kangaka kumagazini.
Kwangenza ngaqala ukucabanga ngokuvelayo okushiywa ngabathengisi. Sibambeke kakhulu kwimidiya yedijithali kulezi zinsuku ngenxa yezindleko eziphansi namakhono obuchwepheshe okhohlwayo ukuthi abantu abaningi babona kuphela esikwenzile ngombhalo nangezithombe. Uma sithatha inothi, singenza ividiyo lapho bengakwazi khona manje bheka futhi zwa thina. Kepha lokho kuseyizinzwa ezi-2 kuphela kwezingu-5 esikwazi ukufinyelela kuzo.
Uma ufuna khulisa ukuhola, akukhona nje ukusunduza enye i-imeyili ebhokisini labo lokungenayo. Udinga ukufinyelela kulolo hola futhi wenze umxhwele uma ufuna ukubashayela ukuze bathathe isinyathelo esilandelayo sokuthenga, ukusayina kabusha inkontileka, noma ukwandisa ukusetshenziswa kwemali nenhlangano yakho.
Ungazifinyelela kanjani zonke izinzwa - thinta, phunga, nambitha - ukushiya isithombe esihlala njalo? Uma usedolobheni elifanayo, mhlawumbe kulula njengokuthatha ikusasa lakho noma iklayenti lakho ukuyodla isidlo sakusihlwa. Kepha abaningi bethu basebenza ngaphandle kwebanga lokushayela ngakho ukukhetha kuncane. Mhlawumbe ungaba nomkhiqizo owenziwe ngokwezifiso noma kuthuthukiswe isiqeshana esihle sokuphrinta. Mhlawumbe ungafaka ibhodlela lewayini noma isibiliboco sendawo esithunyelwa ngeposi.
Okube yinto ejwayelekile manje sekuyivelakancane - kukhomba ithuba elimangalisayo lokuzihlukanisa nomncintiswano wakho. Yini ongayenza ukushiya isithombe esingapheli ngokuthinta, ukuhogela nokunambitha?
Tags: 5 izinzwaisizukulwane esihola phambili se-b2bubudlelwane bamakhasimendeubudlelwane bamakhasimendezwaukuhola ukukhulisamarketingukukhulisabhekaizinzwaiphungaUkunambithauthinte
URiffle: Thola Le Plugin ye-Chrome ye-Twitter Manje!